EIBAR VS REAL MADRID: Shaxda & safafka ay duhurkan kusoo geli karaan! – Gool FM
(Eibar) 10 Maarso 2018 – Waxaa isla maantadan duhurkii gegada Estadio Municipal de Ipurua ay kooxda Eibar kusoo dhowaynaysaa horyaallada Real Madrid todobaadka 20-aad ee horyaalka Liga Santander 2017-18.
Naadigan ayaa woxoogaa dhibaato ah ka sheeganaya dhanka faya qabka laacibiintiisa, iyadoo ay 5 ka mid ah safka 1-aad ka dhaawacan yihiin. Fran Rico iyo xiddigga ay dhowaan keensadeen ee Jovanovic ayaa la tacaalaya dhaawacyo jilibka ah. Garabka Orellana ayaa dhaawac muruqa ah ku maqan, halka Sergi Enrich iyo Ruben Pena ay iyaguna murqaha ka sheeganayaan.
Dhanka Real Madrid
Los Blancos ayaa si ka duwan Eibar waxaa u diyaar ah laacibiinteeda oo idil, balse waxay wax ka beddeli kartaa safkeeda kasoo badiyay PSG. Horraantii fasalkan, Real Madrid ayaa aad uga saa’id caleeysey Eiber oo ay 3-0 afka u gelisey, markanse waa guriga Eiber.